Ubeko PCB, PCB Khuphela, PCB umva
I-PCB Clone, i-PCB kungamampunge, ukwenziwa kwe-SMT,
Indibano yeBhodi yeSekethe eprintiweyo kunye nemveliso eninzi
Ukubuyela umva kwe-MCU, ukuhlaselwa kwe-MCU, IC Crack, IC deciphering
Uphuhliso lweNkqubo yeChip
Ukubhabha kwe-chip chip yokubhabha
Sinokubona ezinye zeemoto zijika zibe ziinqwelomoya okanye izikhephe ezihamba ngesantya esiphezulu kwezinye iimuvi eziyintsomi. Ipholile kakhulu. Nangona imoto ebhabha kubomi bokwenyani ingenakho ukusebenza ngokutshintsha ngokukhululekileyo kweefom njengakwimovie, imoto ebhabha ayiselophupha. Imoto ebhabha yinyani i ...
Izinto ezisibhozo ekufuneka ziqwalaselwe ngaphambi kokuvelisa iibhodi zesekethe
Kunyaka omtsha, unayo iprototype yoyilo olutsha oza kuyiziswa kwindibano ye-PCBA? Mhlawumbi uzimisele ukubeka isiqwenga se-Hardware kuyilo oluninzi kulo nyaka, kodwa kusenokuba nzima ukuwugqiba lo msebenzi okokuqala! Kule nqaku, ndifuna ukwabelana ngezinto ezisibhozo ...
Ukukopisha i-PCB kuya kuqhubeka nokwenza iinzame kwi-aerospace
Kungekudala, i-China Resources 3 02 satellite yaphehlelelwa ngempumelelo ukusuka eTaiyuan Satellite Launch Centre kwaye yangena ngempumelelo kumgaqo omiselwe kwangaphambili. Iyakuthungelana nezixhobo zesathelayithi ezingama-3 01 ukuqinisekisa ukufunyanwa kwexesha elide kunye nokuzinzileyo kwedatha yemephu ye-stereo yemephu ephezulu. S ...
Ubuchule bokwenza i-chip decryption buthatha ithuba lokukhulisa izinto ezintsha eziziisekondari
Kuba abantu abaninzi banokungaqondani malunga nokususwa kwe-chip, ngoku kuphuhliso oluqhubekekayo kunye nobunzulu beshishini lokumisela, umbono we-chip decryption wandisiwe kuluhlu olubanzi, kwaye ukuphindaphindwa kwento elula kunye nokwenza izinto ngokuyekiswayo kuye kwashiywa. Nangona ukuguqulwa kwe-chip ...
Ukudityaniswa kwe-SCM yokudityaniswa komxokelelwano wokudityaniswa kwamashishini: uyilo, ukudityaniswa kwemizi-mveliso, iYunivesithi, uphando kunye nesicelo
Emva kokudodobala koqoqosho kwihlabathi liphela ngo-2013, ishishini lokuchithwa kwe-MCU lase China lijamelene neengxaki ezininzi, ikakhulu kwezi zinto zilandelayo: okokuqala, ishishini lokuchithwa kunye nohlobo lwemveliso alutshatanga, kwaye amandla ophuhliso lwamashishini awanelanga; Okwesibini, kukho isixa esingaphezulu kwesihlobo ...
Uphuhliso lwasekhaya lokunciphisa ngokwenza ikopi ye-PCB
Kuyaqondakala ukuba kwiminyaka yakutshanje, urhulumente kunye nomzi mveliso bahlawula ngakumbi nangakumbi kumzi mveliso weerobhothi kuba iirobhothi zorhwebo zinokuphinda zisebenze ixesha elide kwaye zisebenze kwindawo ezinobungozi nezirhabaxa. Nangona i-China lilizwe elikhulu labasebenzi, ngokufika kwe ...
Ikopi yebhodi yesekethe yaqala ukudubula okokuqala kwimarike yeqhinga lesizwe
Ukukopisha ibhodi yesekethe kukudubula kokuqala kwimarike yeqhinga lesizwe. Ngokubanzi, inkqubo yokukopa ye-PCB inje. Iifayile ze-PCB, i-bill yezinto (i-BOM) zeefayile, iifayile zesikimu kunye nezinye iifayile zobugcisa zeemveliso zoqobo kunye neefayili ze-PCB zesikrini zokuprinta iifayile zemveliso zibuyiselwa 1: ...
Ungasiphucula njani isantya sokufunda kwebhodi
Ungasiphucula njani isantya sokufunda kwebhodi? Ngokweendaba zamva nje kolu shishino, isantya sokufunda kwebhodi ye-PCB yezixhobo nayo inyuke nge-25%, kwaye isantya sokupholisa sonyuke amaxesha ama-5. Iindleko zokufunda zebhodi yento nganye ziphantsi. Amalungu ongezelelweyo angongezwa kwi-ongoin ...
Yintoni ukusetyenziswa kweprototyping?
Imveliso yohlobo lweprototype ayisiyongqamaniso kuphela kwinkqubo yoyilo lwemveliso, kodwa ikwanekhonkco eliyimfuneko lokuqinisekisa ukusebenza kunye nokuvavanywa ngaphambi kwemveliso emininzi. Nokuba yimveliso ezimeleyo i-R & D kunye noyilo okanye imveliso yophuhliso lobunjineli, ukuveliswa kwemveliso yohlobo ...
Inkampani ekopisha i-PCB ikhuthaza uphuhliso ngokuxelisa kunye nokwenza izinto ezintsha
Ikopi ye-PCB, oko kukuthi, ngophando lobuchwephesha lobuchwephesha, 1: 1 uhlalutyo oluphindaphindwayo kunye nokubuyiselwa kweefayile zemveliso ze-elektroniki ezikhoyo, iibhili zezinto (i-BOM) zeefayile, iifayile zesikimu kunye nefayile ye-PCB isilk yokushicilela iifayile, emva koko usebenzise ezi fayile zobuchwephesha kunye imveliso imveliso PCB manu ...
Uguqulelo lwemfihlo lwe-Mm908e621, u-mm908e622 ubizo, u-mm908e624
Kukho iimeko ezininzi apho ubuchwepheshe be-sitch boyisile ubukrelekrele. Umzekelo, iiprojekthi zokuchazwa kwe-chip ezaziwayo ze-Motorola, i-Samsung kunye nezinye iimveliso ezinxulumene noko ziye zafikelela kwintsebenziswano kunye ne-sitch kwiminyaka embalwa eyadlulayo. Uluhlu olupheleleyo lwexabiso eliphantsi kunye nokusebenza okuphezulu kwe-8-bit mic ...
Ubuchwephesha bokubhonkxa kwebhodi eyahlukeneyo kwinkqubo yokukhutshelwa kwebhodi yesekethe
Okokuqala, xa kufikwa kwiskena, sihlala sijonga icala ngoonobumba abaninzi, oko kukuthi, umaleko ophezulu. Dlulisa umfanekiso okwinqanaba eliphezulu kwi-quickpcb, khuphela zonke izinto zayo, gcwalisa ikopi yebhodi yenqanaba eliphezulu, kwaye ugcine ifayile yeB2P. Emva koko, siyayifaka i-PCB kwaye siyiskenishe icala layo ...
Inkqubo yeCM MCU
IC MCU samandla Socket
Iyunithi yeLCD IC Burn, umdwelisi wenkqubo
Idilesi: Igumbi 302, iSakhiwo seRongXing, iFuHao Garden, i-168 # Road Bulong, iBantian Street, iSithili saseLonggang, iSixeko saseShenzhen, iGuangdong, China.
Ifowuni: +86 189 0285 6696
ifeksi: +86 755 8304 5278
Ihlokondiba: +86 134 8015 1328
Ishenzhen Sichi Technology Co., LTDumthetho wabucalaImimmiselo nemiqathango